Labo ka mid ah wasiirada Soomaaliya oo u safray Tunisia (Sababta socdaalkooda) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Labo ka mid ah wasiirada Soomaaliya oo u safray Tunisia (Sababta socdaalkooda)
26th April 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka arrimaha debadda Cabdiraxmaan Duceele Beyle iyo wasiirka maaliyadda Xuseen Cabdi Xalane ayaa shalay u ambabaxay dalka Tunisia.
Labadan wasiir ee ka socda Soomaaliya oo ay wehlinayaan xubno kale ayaa dalka Tunisia kula kulmi doona madaxda Baanka Horumarinta Afrika, sidoo kale waxey la kulmid doonaan qaar ka mid ah wasiirada dalkaas.
Sida uu sheegay wasiir Beyle, waxaa u qrosheysan iney la kulmaan madaxweynaha Bankiga horumarinta Afrika, Donald Kaberuka oo ah, qaar ka mid ah madaxda waaxyaha kala duwan ee bankiga, asiirka Arrimaha Dibadda Tunisia Mongi Hamdi, Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda dalkaas, Hakim Ben Hammouda iyo mas’uuliyiin kale.
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Dhiirigelinta Maalgashiga Cabdiraxmaan Duceele Beyle oo shir jaraa’id ku qabtay garoonka diyaaradaha Muqdisho kahor inta aanu ka ambabixin isaga iyo wafdigiisa, ayaa waxa uu sheegay in madaxda bankiga horumarinta Afrika ay kala hadli doonaan fududeynta deeqaha maaliyadeed ee ay ugu talagaleen wadanka Soomaaliya, iyadoo qaar ka mid ah Wasiirada dowladda Tunisia ay u bandhigi doonaan hindise cusub oo horumarinaya xiriirka labada dal , kana qeyb qaadanaya kobaca dhaqaale iyo maalgashi.
Dr. Beyle ayaa waxa uu xusay in socdaalkooda wadanka Tunisia kadib ay u gudbi doonaan wadanka Iskutagga Imaaraadka Carabta oo ay kaga qeybgali doonaan shir ku saabsan maalgashiga.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Duceele Beyle ayaa waxa uu carabaabay in ay la kulmi doonaan Wasiirka Arrimaha Dibadda Imaaraadka Carabta, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan iyo Wasiiro kale, ayna kala hadli doonaan fulinta mashaariic horumarin oo dib u dhiska iyo maalgashiga dalka ku qotoma waxaana uu yiri “Waxaan rajeynayaa in booqashooyinkeena shaqo ay ku dhammaadaan guul iyo is afgarad”.
Isla shalay waxaa dalka Sudan u ambabaxay wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya Jen. Maxamed Sheekh Xasan Xamuud, isagoo halkaas kula kulmi doona dhigiisa Sudan Jen. Cabdiraxiim Maxamed Xuseen.
Dowladda Soomaaliya oo u riyaaqday tababar FIFA ku qabatay Muqdisho